Igbo, John: Lesson 088 - Atọ n'Ime Otu na-adabere na ndị kwere ekwe site n'aka Onye Nkasi Obi (Jọn 14:12-25) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 088 (The Holy Trinity descends on believers)
C - AHỤ OKWU N'OGE MGBE (Jọn 14:1-31)
2. Atọ n'Ime Otu na-adabere na ndị kwere ekwe site n'aka Onye Nkasi Obi (Jọn 14:12-25)
21 Onye nēnwe ihe nile M'nyere n'iwu, nke nēdebe kwa ha, onye ahu bu onye nāhum n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna m ga-ahụ n'anya, m ga-ahụkwa ya n'anya, m ga-ekpughere onwe m nye ya."
Mmiri nke ngọzi na amara na-esi na Jizos Kraist abanye n'ime Nzukọ Ya n'oge niile. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị kwere ekwe niile jupụtara na mmiri, mmiri nke amara ga-anọgide. Tupu ndị iro ya, Jizọs aghaghị iguzosi ike n'ihe ọ na-ekwu na ya bụ Mesaya na Ọkpara Chineke. Otú ọ dị, n'ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ, o kpugheere akụ na ụba nke mmekọrịta ya na Nna na oge ikpeazụ ndị a. Mee ka obi anyi meghee anya ka oke nke chi nke Kraist we mejue ayi.
Jizọs gwara anyị na ịhụnanya ndị na-eso ụzọ ya nwere n'ebe ọ nọ abụghị mmetụta ọ bụla nke na-esi n'ezi obi pụta, kama na a wuru ịhụnanya a n 'nrubeisi n'iwu ya na arụmọrụ ya. Mmadu nke anumanu adigh anabata ntukwasi obi nke n'eme ka Kraist huru ya n'anya. Ọ na-emeghere anyị ụlọ akụ nke eluigwe ma na-eziga anyị ijere ụmụnna anyị ndị furu efu na ndị na-ewuli elu; ọ na-enye anyị ike ịghọta atụmatụ ya maka anyị. Iwu ya abughi ihe siri ike ma o bu ndi a na-agaghi ekwe omume n'ihi na ure nke Mo Nso na-akpali anyi, mọ nke eziokwu n'eme kwa anyi ka anyi kwuputa ihe ojoo ma obu omume ugha anyi mere. Mmụọ a na-ewusi anyị ike idebe iwu ya n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya wee zọpụta anyị ruo mgbe niile, ya mere, anyị hụrụ ya n'anya wee jegharịa na Mmụọ ya.
Ị hụrụ Jizọs n'anya? Ejila "Ee" eji obi ụtọ azaghachi ozugbo. Ma ọ bụ na-azaghachi ọchịchịrị "Mba". Ọ bụrụ na a mụọ gị ọzọ, Mmụọ Nsọ n'ime gị ga-asị, "Ee, m hụrụ gị n'anya, Onyenwe anyị Jisọs, n'ihi ịdị ukwuu gị na ịdị umeala n'obi gị na onyinye gị na ndidi gị, i meela ka m nwee ike ịhụ n'anya." Mkparịta ụka a na Mmụọ Nsọ n'ime anyị abụghị olileanya efu ma ọ bụ ihe ịchọ mma, ma dabere na mkpebi nke ime omume ịhụnanya. Onyenwe anyi n'eme ka ndi mmadu huru ya n'anya ma kpoo ha n'ime ya site na amara.
Chineke hụrụ ndị hụrụ Jizọs n'anya n'anya. Nna nyere ikike niile na ebere n'ebe Ọkpara ya nọ ịzọpụta ụmụ mmadụ. Onye na-anabata Jizọs, na-anabata Chineke, onye ọbụla na-agọnahụ Ọkpara ahụ, jụ Chineke. Ị ghọtara na Chineke na-akpọ gị, "Onye m hụrụ n'anya", n'ihi na Mmụọ nke Kraịst agbanweela gị ma mee ka ị bụrụ onye na-ahụ n'anya. Ị naghị adị mma n'ime onwe gị, ma ịhụnanya Chineke mere ka ị bụrụ onye e kere eke ọhụrụ. Kraịst na-arụ ọrụ n'ime gị na-arịọchitere gị arịrịọ maka Nna gị ma debe gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-ekpughe onwe ya nye gị site na mmesi obi ike ime mmụọ. N'agbanyeghị ihe ị na-etolite n'ihe ọmụma nke Onye Nzọpụta gị, ihe ọmụma ahụ ga-ada mbà, n'ihi na ihe ọmụma pụtara ibu nrubeisi, ịhụnanya, ịchụ àjà na ịjụ onwe onye.
22 Judas (ọ bughi Iskariot) siri Ya, Onye-nwe-ayi, Gini mere Gi onwe-gi nāchọ igosi Onwe-gi nye ayi, ọ bughi uwa? 23 Jisus zara ya, si, Ọ buru na madu hurum n'anya, Nnam gāhu ya n'anya, ayi gābiakute kwa Ya, me kwa ulo-ayi. 24 Onye na-ahụghị m n'anya adịghị edebe okwu m. Okwu nke unu nānu abughi nkem, kama ọ bu Nna nke ziterem. 25 Ihe ndia ka M'gwaworo unu, mb͕e Mu na unu nānọgide.
Jizọs nwere onye ọzọ na-eso ụzọ a na-akpọ Judas, ọ bụghị Iskarịọt. Enye ama ọfiọk ke Jesus ama ọtọn̄ọ ibuotikọ emi ebe ọtọn̄ọde owo emi ẹkeyakde enye. Ọ na-enyo enyo na ihe omume ga-emenụ ga-ewere ọnọdụ.
Jizos azaghi ya, kama o kwuputara ihe bu isi nke Nzuko anyi na mkpa ya nke nwuru n'uwa. Jisos gosiputara ha uzo nke gedu ezi omuma nke Chineke. Nke ahụ bụ eziokwu bụ na ịmara Jizọs na ịnakwere ya na-eme ka ọ pụta ìhè na ndụ ọhụrụ na ike Mmụọ Nsọ iji debe iwu ya ma hụ ịhụnanya Chineke. Mgbe ahụ, Jizọs kwuru okwu na-akpali akpali, "Anyị bịara onye kwere ekwe ma n'ebe ahụ ka anyị na-ebi." Ọ bụghị ebe a na-ekwu banyere Chọọchị n'ozuzu ya, mana ndị kwere ekwe n'otu n'otu. Atọ n'Ime Otu dị nsọ na-eleta onye kwere ekwe ma na-ebi n'ime ya. Okwu a na-agbanye n'ime obi mmadụ dị ka à ga-asị na ọ nọ na Mmụọ Nsọ, Ọkpara na Nna. N'ịbanye n'ọganihu nke nzọpụta, mmadụ na-achọpụta na Chineke na-ekpuchi ya kpamkpam ma na-echebe ya n'onwe ya. Onye obula nke tukwasiri obi na Kraist nwere ihe omimi a.
EKPERE: Atọ n'Ime Otu, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, m na-efe gị, na-ekele ma na-eto gị. I letawo m, wee mee ka m bụrụ onye mmehie. Gbaghara m mmehie m. Ekele dịrị maka ike nke ịhụnanya e nyere m, nakwa maka Mmụọ nke ịhụnanya n'ime obi m. Debe m n'aha gị.
Olee otú ịhụnanya anyị nwere n'ebe Kraist nọ na-eto eto, oleekwa otú Nsọ Atọ n'Ime Otu si adakwasị anyị?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)